> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Sony Cybershot
Common Sony Cybershot seenyada camera khasaaro sawir
Photos tirtiray adigoo riixaya ah "Delete All" badhanka si qalad ah aad kamaradaha Sony Cybershot;
Photos lumay marka wareejiyo kombiyuutarka;
Baadi Camera weydiiyo qaab, sida "disk ee drive aan formatted", "kaadhka aan initialized", iwm .;
Photos geli karin ama la la'yahay ka kharribeen ama burburtay kamaradaha Sony Cybershot;
Xaaladood khasaaro sawir More sidan oo kale.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka kamaradaha Sony Cybershot
Macna ma laha inta aad sawiro aad ka camera Sony Cybershot laga badiyay, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa ilaalinta camera aad ammaan ah oo aan loo isticmaali karin in lagu soo qabto sawiro cusub ama videos, haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado sawiro ka camera Sony Cybershot. Qabsashada sawiro cusub / videos overwrite doonaa sawiro lumay oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Tani waa mid aad muhiim u ah.
Next, heli Sony Cybershot software ah soo kabashada sawir smart oo uu bilaabo inuu ka soo kabsado photos lumay ugu dhaqso badan. Haddii aadan helin mid weli, halkan waxaad heli kartaa aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP), ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Software Tani waxay kaa caawin kartaa in aad soo kabsado photos Sony Cybershot in 3 tallaabo, wax aad u tirtiray, formatted ama iyaga lumay ay sabab u tahay sababo kale.
Download version maxkamada ee xorta ah ee Sony Cybershot software kabashada camera sawirka hoos ku hadda.
Step1. Orod camera software kabashada sawir Sony Cybershot ah
First of dhan, xirmaan camera aad u computer meesha aad ku rakiban barnaamijka dib u soo kabashada, kadibna software oo guji "bilow" furmo suuqa hoose si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Sony Cybershot.
Step2. Sawirka sawiro laga badiyay aad camera Sony Cybershot
Dooro camera (bandhigay sida halkan warqad drive a) oo guji "Scan" si ay u baadhaan photos lumay ka. Software Arintan waxay u sahlaysaa inaad hesho sawiro lumay, video iyo files audio. Haddii aad rabto in aad kaliya inuu ka soo kabsado sawiro, aad nadiifin kartaa natiijada scan oo isticmaalaya "Xulashada Filter".
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada camera Sony Cybershot
Marka sawirka dhameystiray, waxaad ku eegaan kartaa mid ka mid sawirka ka mid, si loo hubiyo tayada. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho". Waxaad iyaga oo dhan badbaadin karo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad camera Sony Cybershot ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Digital Kaameerada
Sidee si ay u helaan macruufka 9 ee kaabta faylasha
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Canon EOS 7D Digital